တောင်းချင်ဦးဟဲ့ အကြော်ဖိုးးးးးးးး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » တောင်းချင်ဦးဟဲ့ အကြော်ဖိုးးးးးးးး
Posted by mamanoyar on Jan 9, 2013 in Short Story | 20 comments
အဲဒီဆင်းရဲသားလေးဟာ ဟိုဘက်ရွာက သူဌေးကြီးဆီမှာ တစ်နေကုန်အလုပ်လုပ်ရသတဲ့
ဆင်းရဲသားလေးဟာ သူဌေးကြီးဆီမှာ အလုပ်တွေကို တစ်နေကုန်သည့်တိုင်အောင် ကြိုးကြိုးစားစား မခိုမကပ်ပဲ လုပ်ပေးသည့်အတွက် သူဌေးကြီးက သဘောကျပြီး လုပ်အားခငါးကျပ်အပြင် ထမင်းကြမ်းခဲတစ်ခဲပါ ပေးလိုက်သတဲ့ ဆင်းရဲသားလေးလည်း ပိုက်ဆံငါးကျပ်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ပြီး ထမင်းကြမ်းခဲလေး ဆုပ်ကာ အိမ်ပြန်လာခဲ့တာပေါ့
လမ်းမှာ အကြော်ကြော်နေသည့်ဈေးသည်ကိုတွေ့တော့ အကြော်တွေအရမ်းစားချင်ခဲ့တာပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံစုချင်တဲ့အတွက် အကြော်ဝယ်မစားပဲ အကြော်ကြော်နေတဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းနားက သစ်ပင်အရိပ်အောက်မှာ ထိုင်ပြီး အကြော်နံ့လေးခံပြီး ထမင်းကြမ်းခဲကို ကိုက်စားနေခဲ့သတဲ့။ သူလဲထမင်းစားပြီးတဲ့အခါ အကြော်သည်က ဆင်းရဲသားလေးဆီကို အကြော်ဖိုး ပိုက်ဆံလာတောင်းသတဲ့။ ဆင်းရဲသားလေးလည်း သူမစားပဲမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောတော့ အကြော်သည်က မင်းငါ့အကြော်နံ့နဲ့ ထမင်းစားတာ အကြော်ဖိုးပေးရမှာပဲလို့ ဇွတ်တောင်းသတဲ့။
ဒီလိုနဲ့ အကြော်သည်ကလဲ တောင်း ဆင်းရဲသားလေးလည်း မပေးနိုင်ဘူး ငြင်းရင်းခုန်ရင်းနဲ့ပဲ သူကြီးအိမ်ရှေ့ကိုရောက်လာသတဲ့။ သူကြီးလဲမေးမြန်း ကြည့်ပြီးအကြောင်းစုံကိုသိရတာပေါ့။ ပညာရှိတဲ့သူကြီးလဲ လူအများရှေ့မှာ ဆုံးဖြတ်ပေးလေသတဲ့။ သူကြီးက ဟုတ်တာပေါ့ အကြော်နံ့နဲ့ထမင်းစားတဲ့အတွက် ပိုက်ဆံပေးရမှာပေါ့လို့ ပြောလိုက်သတဲ့။ အဲဒီအချိန် လူအများက အံ့အားသင့်သွားသတဲ့။ ရွာသူကြီးလဲ ဆင်းရဲသားလေးအား ပိုက်ဆံဖြန့်ပြီး ရှေ့ထွက်စေသတဲ့။ အဲဒီနောက် ဆင်းရဲသားလေးရဲ့ပိုက်ဆံကိုဖြန့်ပြီး နေပူမှာ ထောင်ပြီးကိုင်ခိုင်းထားသတဲ့ကွယ်။ အကြော်သည်ကိုလဲ ရှေ့ထွက်စေပြီး ဆင်းရဲသားလေး ကိုင်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံရဲ့အရိပ်ကို ယူစေသတဲ့။ အဲဒီမှာပဲ အကြော်သည်ကိုပြောလိုက်သတဲ့။ သူစားတာကလဲ မင်းရဲ့အကြော်ကိုစားတာမဟုတ်ပဲ အနံ့ကိုစားတာဖြစ်တဲ့အတွက် မင်းလည်း ပိုက်ဆံကိုမယူရပဲ ပိုက်ဆံရဲ့အရိပ်ကိုပဲ ယူရမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သတဲ့ကွယ်…..။ အဲဒီအခါမှ လူအများလဲသဘောပေါက်ပြီး အကြော်သည်လဲ သူ့ရဲ့မက်မောမှု၊ မတရားမှုတွေကြောင့် လူအများရှေ့မှာ အရှက်ရသွားတော့သတဲ့ကွယ်။။။။။။။။။။
အစ်မ ပုံပြင်လေးကကောင်းသာပဲ လူတစ်ရောက်ရဲ့လောဘကို ပုံဖေါ်ထားတာပဲ
တစ်ခုစဉ်းစားမိတာက ကျုပ်တို့ သဂျီးဆို ဘယ်လိုများ ဆုံးဖြတ်မလဲလို့ ပေါ့ 
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းပါတယ် ။
မရေးတာ ကြာပြီထင်ပါတယ် ။ဆက်ရေးပါဗျာ ….
သဂျီးလား… အကြော်သည်ဂျီးဆီက အကြော်တွေစားပြီး အာပေါင်အားရင်းသန်သန် တရားဥပဒေ ဥဘဒက် ဖဒရယ် ဖက်ဒရက် စာလုံးတွေနဲ့ ကောင်လေးဆီက ငွေငါးကျပ်ကို ဒဏ်ကြေးဆိုပြီး သိမ်းလိုက်မှာပေါ့…. နှစ်တသောင်း ကြိမ်ဇာ….
ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးမှာ မိဖုရားတွေတော်တော်များတယ် ( မိန်းမတွေတော်တော်များတယ် )
တစ်နေ့အဲ့သည်ဘုရင်ကြီးဟာ သူ့ရဲ့ အလှပဂေးမိဖုရားတွေနဲ့ တိုင်းခန်းလှည့်လည်လာတုန်း
မကြာဘူး ဘုရင်ကြီးရဲ့ များစွာကုန်သော မိဖုရားတွေထဲက အလှပဂေး မိဖုရားတစ်ပါးဟာ
အဲ့သည်ခြေလက်တွေမရှိတဲ့လူယောက်ျားကို လင်အဖြစ်ပေါင်းသင်းဘို့ ခိုးပြေးသွားပါလေရော
ကော်မန့်တစ်ခါပေးဘို့အရေး ဂဏန်းပေါင်းစက်နဲ့ ပေါင်းနှုတ်မြှောက်စားလုပ်နေရသေးဒယ်
ဟုတ်ဒယ် .. ဥအောင်ဘုဂျီးး
ဒါ သဂျီး သက်သက် ညစ်နေဒါ ..
တမင်သက်သက် အလုပ်ရှုပ်အောင် လုပ်နေဒါ …
အိုက်ဒါဂျီး ပြန်ဖြုတ်ပေးဘာ … ငွင်းး ငွင်းး
အနံ့ နဲ့ အရိပ် ….
အရိပ်က မြင်ရသေးတယ် …
ဒီတော့ တရားဆုံးဖြတ်တဲ့ ကိစ္စမှာ တွေးကြည့်လိုက်ရင်ဖြင့်
ဆင်းရဲသားလေး ဘက်က နည်းနည်း နစ်နာနေဒယ် ..
ဒီတော့ အမိန့်ချမယ် …
ဆင်းရဲသားလေးကို အကြော်သည် သမီးနဲ့ ပေးစားစေ …
ဝယ် … ဝူ ….
အကြော်သယ် ဖက်ကို မတရားတာထင်တယ်
အနဲ့ ကရှုပြီးယူ လို့ရပေမယ်.. အရိပ်က ယူလို့မှမရတာ
ဒါဆိုလဲ ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် သာ ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ပါတော့
အဲဒါကျုပ်လည်း.. “မစားရအညှော်ခံ ” ဆိုတဲ့ဆိုင်ဖွင့်စားမလားလို့..
အဲဒီထဲက ဆင်ကောင်လုံးကြော် နဲ့ကျား ပြုတ်ကြော်စားချင်လို့
အဲဒါတွေကြော်ဖို့ ပြုတ်ဖို့ စက်ရုံမှာ ဒယ်အိုး အော်ဒါမှာထားပါတယ်တဲ့ မမနိုရာရေ။
အင်း… ခပ်ငယ်ငယ်ဘ၀ကို ပြန်ရောက်သွားသလိုပဲ။ ငယ်ငယ် အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်တွေထဲက တစ်ပုဒ်ပေါ့။ ပြီးတော့ ပြောပြတဲ့မေမေက ပြောသေးတယ်။ အကြော်သည်ကို ဥပမာပြုပြီးတော့ သူများဆီက မတရားမယူရဘူး။ မလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့အသိလေးပါ တစ်ခါထဲသွင်းပေးခဲ့တယ်လေ….
ပို့စ်ကို ဆုံးအောင် မဖတ်သေးပဲ .. အကြော်သည်ကို ပိုက်ဆံပေးရမယ်လို့ ပြောတဲ့အထိဖတ်ပြီး …
အနံ့ ရှုတိုင်းသာ ပိုက်ဆံပေးရမယ်ဆိုလျှင်လေ .. လှည်းတန်းဈေးနားက ညနေပိုင်း ဖြတ်တဲ့ လူတိုင်း … အဟီး .. မွဲကုန်ပြီပေါ့လို့ … ဒီလူကြီး အတော်ဥာဏ်နဲလှချည်လား လို့ .. အပြစ်တင်စောသွားတယ် .. တကယ်တမ်းဥာဏ်နဲတာ ..ပုံပြင်ထဲက သူကြီး မဟုတ်ပဲ … ကိုယ်ဖြစ်နေမှန်း ပို့စ်ဆုံးမှပဲ သိတော့တယ် ….
မမအိတုန်ရေ အနံ့ရူတိုင်းသာ ပိုက်ဆံပေးရမယ်ဆိုရင် အဲဒီနားဖြတ်တဲ့
လူတွေ မွဲမမွဲတော့မသိဘူး နိုရာ ရန်ကုန်အလည်သွားတော့ ဘုရားဖူး
လိုင်းကားစီးပြီးသွားကြတာပေါ့ မြို့ထဲရောက်တော့ ကြော်နေလိုက်ကြတာ
ကားမူးပါတယ်ဆိုမှ အကြော်နံ့တွေကနံနဲ့ ဆူးလေဘုရားလဲရောက်ရော